आज साँझसम्म ८१ हजार जनाले लगाए जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप – Voice of Kathmandu
आज साँझसम्म ८१ हजार जनाले लगाए जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप
काठमाण्डौं, २०७८ साउन ६ गते बुधबार । कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप अहिलेसम्म ८१ हजार ३५२ जनाले लगाइसकेका छन् । साउन ४ गतेदेखि शुरु भएको जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप अभियानमा बुधबार अपराह्न ४ बजेसम्म ८१ हजार ३५२ जनाले लगाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ ।
जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप अभियानमा अहिले सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मात्र सञ्चालन भएको मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा.अधिकारीले बागमती प्रदेशमा ७८ हजार ४३५ जना र गण्डकी प्रदेशमा २९ सय १७ जनाले जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप लगाइसक्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
अमेरिकाले उपलब्ध गराएको जोन्सन एण्ड जोन्सनको १५ लाख ३४ हजार ८५० डोज खोप असार २८ गते नेपाल आइपुगेको थियो । यो खोप वैज्ञानिक हिसाबले एक डोज लगाए पुग्ने खोप हो । यसैगरी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालमा कोभिशिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एण्ड जोन्सन गरी तीन प्रकारको खोप प्रयोगमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
जसअन्तर्गत कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लगाउनेहरुको सङ्ख्या १८ लाख २८ हजार ४८४ जना रहेका छन् । साथै, कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउनेहरुको सङ्ख्या चार लाख ६० हजार ७३४ रहेका छन् । त्यस्तै, भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउनेहरुको सङ्ख्या १४ लाख २३ हजार ४४७ रहेका छन् भने दोस्रो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या छ लाख ८२ हजार ३९२ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र अनलाईन
Previous चीनले बनायो प्रतिघन्टा ६ सय किलोमिटरको गतिमा हुईकिने रेल
Next ‘भेरोसेल’खोप ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज राती चीन जाँदै